Guddoomiye Ku Xigeenkii Koowaad ee Guurtida Oo Ku Geeriyooday Hargeysa | Salaan Media
Hargeysa (SM)- Alle Ha u naxariistee waxa saaka waabarigii ku geeriyooday Gurigiisa Magaaalada Hargeysa Gudoomiye Ku xigeenkii koowaad ee Golaha Guurtida Marxuum-Sheekh Axmed Nuux Furre oo sida la sheegay u jiifay xanuun in muddo ah hayay.
ALLE ha u naxariistee Sh. Axmed Sh, Nuux Furre waxa uu Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee Golaha Guurtida ahaa 22-kii sanadood ee Somaliland madax-banaanideeda kala soo noqotay Soomaaliya.
Marxuumku waxa uu ka mid ahaa xubnihii faro ku tiriska ahaa ee lagu aasaasay Golaha Guurtida, waxaanu ka mid ahaa horseedkii kaalinta weyn ka soo qaatay nabadayntii beelaha, hubka dhigistii maleeshiyaadkii iyo dib u dhiska Hay’adaha dawliga ah.
Alle ha u naxariistee Marxuumka waxa aas qaran maanta loogu samayn doonaa qabrigii ku yaala xaafadda Gol-jano ee magaalada Hargeysa.
Shirgudoonka Goleyaasha Baarlamaanka Somaliland ayaa dhambaalo tacsi ah u diray qoyskii, qaraabadii, Golaha Guurtida iyo shacbiga Somaliland ee uu ka geeriyooday ALLE ha u naxariistee Marxuum- Sheekh Axmed Furre oo ay ku sifeeyeen rukun weyn oo ka baxay qaranka Somaliland, waxaanay ILAAHAY uga baryeen Marxuumka inuu naxariistii jano ka waraabiyo qoyskiisiina samir iyo iimaan ka siiyo.